UMphathiswa: Wonke umntu waseJamani uya kugonywa, aphiliswe okanye afe
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamani zokuPhula » UMphathiswa: Wonke umntu waseJamani uya kugonywa, aphiliswe okanye afe
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseJamani zokuPhula • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Umphathiswa wezempilo waseJamani uJens Spah
Ngokomphathiswa, wonke umntu elizweni uza kugonywa okanye anikezele kwi-coronavirus kwiinyanga ezizayo.
Umphathiswa wezempilo eJamani uJens Spahn, namhlanje, ubongoze wonke umntu ukuba agonywe, kodwa wahlala ethandabuza malunga nokwenza ukuba kunyanzeliswe ukudubula. Umphathiswa uthe ukunganyangeki komhlambi kuyakufezekiswa, kwaye "akukho gonyo lunyanzelekileyo oluya kophula eli gagasi" losulelo.
“Mhlawumbi ekupheleni kobu busika, njengoko ngamanye amaxesha kusithiwa, phantse wonke umntu waseJamani uza kugonywa, aphiliswe okanye abhubhe,” utshilo uSpahn.
U-Spahn wenze amagqabantshintshi akhe njengabanye abezopolitiko abaphambili, kuquka abo baphuma kwiChancellor ephumayo u-Angela Merkel. I-Christian Democratic Union (CDU), bebecela isigunyaziso sokugonya kubo bonke abemi phakathi kokunyuka kosulelo lwe-COVID-19.
Umphathiswa waseBavaria-uMongameli uMarkus Soeder uthe ngolweSihlanu izinga lokusuleleka kweentsuku ezisixhenxe “lidubule eluphahleni” phakathi kwabantu abangagonywanga.
“Ndiyakholelwa ukuba ekugqibeleni, asizukuhamba malunga nesibophelelo sokugonywa ngokubanzi,” utshilo.
Ingxoxo efanayo isandula kusetyenziswa enye inkokeli yaseYurophu, iNkulumbuso yaseHungary uViktor Orban. Ethetha nonomathotholo we-Kossuth ngolwe-Sihlanu, ugxeke i-anti-vaxxers, ebabiza ngokuba sisoyikiso esithi "baya kuqonda ukuba banokugonywa okanye bafe."
Novemba 22, 2021 kwi-18: 02
1. "Ugonyo" alukuniki ukhuseleko kwaye lubonakala luhlala iinyanga ezi-6 kuphela.
2. Yayiyinto eyaziwayo kakhulu phambi kwe-covid-19 kwaye yamkelwe ukuba iyenzeka kwizitofu zokugonya ze-covid-19 ukuba isitofu esinganiki ukhuselo lomzimba sikhuthaze intsholongwane ukuba iziguqulele kwiindlela eziyingozi ngakumbi.
3. Yiyo ke loo nto lugonyo oluqhuba ubhubhane hayi umntu ongagonywanga.
4. Kukwafunyaniswa ngoku ngokucacileyo ukuba ukugcinwa kweqondo legazi leenanogram ezingama-50 ngemililitha yevithamin D kuya kuphelisa nakuphi na ukugula okumandundu okanye ukufa ngenxa ye-covid-19.
5. Asinayo indlela yokwazi ukuba zithini iziphumo ebezingalindelekanga zezitofu zokugonya. Nangona kunjalo kucacile ukuba abantu babhubhile kubo kwaye mhlawumbi ngaphezulu kunokuba sisazi kwaye abantu bathwaxwa yimiphumo yempilo engalunganga kubo.
6. Konke oku kunokwamkeleka ukuba ibingekho enye indlela efikelelekayo nekhuselekileyo.
Le ndlela ingenye yivithamin D. Yintoni ekufuneka yenziwe ngamajelo eendaba kunye nabasemagunyeni kwezempilo yoluntu kukugxininisa imfuno yokuba wonke umntu afumane amanqanaba e-vitamin D. Kwaye oku kuthetha ukuthatha 4,000 ukuya 10,000 IU's ngosuku.